Safiirka cusub ee Somalia ee Masar oo warqadaha aqoonsiga laga guddoomay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha dalka Masar Cabdilfataax Al-Siisii oo warqadaha aqoonsiga Danjirimo ka guddoomay Safiirka Cusub oo ay dowladda Soomaaliya dhawaan u magacaawday dalkaasi.
Cabdilfataax Al-Siisii ayaa Madaxtooyada ku qaabilsay Safiirka ee Soomaaliya Ilyaas Sheekh Cumar oo la magacaabay bishii Janaayo ee sanadkaan 2021, isla markaana noqon doona Safiirka dowladda ee Masar ahna Wakiilka Soomaaliya ee Jaamacadda Carabta.
Ilyaas Sheekh ayaa laga guddoomay warqadihiisa aqoonsiga, waxaana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay xilka cusub ee dowladda u magacaawday, isagoo xusay in uu qaban doono arrimo diblomaasiyadeed oo badan.
Madaxweynaha Masar iyo Safiirka cusub ee Soomaaliya Ilyaas Sheekh ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka ka dhexeeyay labada dowladood oo ku saleysan dhinacyo kala duwan, waxaana Al-Siisii uu Safiirka ugu hambalyeeyay xilka loo soo idmaday.
Tirada dadka Cudurka COVID-19 ugu dhintay Soomaaliya oo sare kacday